अमेरिकामा पहिलो नेपाली र जनसंख्या - Enepalese.com
प्रकाश नेपाल २०७७ असार १३ गते १५:२० मा प्रकाशित
अमेरिकामा नेपालीहरु ठ्याक्कै कति होलान भनेर कहिले काही तपाईले सोध्नु भए होला वा सोच्नु भए पनि होला। न्युयोर्क हेर्यो टन्न छन् नेपालीहरु, भर्जिनिया, मेरिल्याण्ड, क्यालिफोर्निया अनि अहिले आएर टेक्सासमा भरिभराउ हुन लागेका छन्। बास्तवमा कति छन् त नेपालीहरु? यसको लागी मैले वाशिंटन डी.सी. स्थित नेपाली राजदुतावासमा सम्पर्क गर्दा पनि खास लेखा राख्न स्रोत नै नभएको जानकारी पाइयो। जे सुकै भएता पनि अहिलेलाई करिब तीन लाखको हाराहारीमै छन् भन्ने बुझेमा सहि नै होला।
सब भन्दा पहिले अमेरिका पाइला टेक्ने नेपाली को होला? सुन्नु भएको छ? नेपालमा अवस्थित अमेरिकी राजदूतावासको अनुसार सबभन्दा पहिले अमेरिकामा आउने व्यक्ति जनरल कृष्णबहादुर राणा हुन् भनेर लेखिएको पाइन्छ। कृष्ण बहादुर राणा एक राणा कालिन राजनीतिज्ञ, आर्मी चिफ र राणाकालमा कोत पर्व का एक नायक पनि हुन् भनिन्छ। सरकारी ओहोदामा थिए उनि र उनको छोरा नै अमेरिकामा पहिलो पटक आएका भन्ने कुरो गुगलमा पढ्न पाइन्छ।
तर मैले यही नै हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन उनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् 1939 तिर आएको भन्ने देखिन्छ तर अमेरिकामा आएर ग्रिनकार्ड पाउने पहिलो नेपाली “सन 1962 मा ग्रिनकार्ड पाएका थिए” भनेर रमेश मल्लले आफ्नो अनुसन्धान नोटमा लेख्नुभएको छ।
यी कुरा जेसुकै भए तापनि अहिले अमेरिकामा नेपालीहरु उल्लेखनीय मात्रामा छन्। करिब तीन लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु छन भन्ने अनुमान भएतापनि ठ्याक्कै यति नै हो भनेर ठोकुवा गर्न गारो छ। यो तिन लाखको गिन्तीमा भुटानी मूलका नेपालीहरु पनि पर्दछन।
नेपालबाट अमेरिका आउने क्रममा उर्लँदो सुरुवात भने आजभन्दा २५ वर्ष पहिले भएको हो। सन् १९९६ ताका पनि नेपालीहरु निकै कम थिए र त्यतिबेला ‘फलानो ठाउमा एउटा नेपाली काम गर्छ रे नि” भन्ने सुन्दा पनि खुसि लाग्थ्यो र भेट्न जान मन लाग्थ्यो। आज शहरहरुमा नेपालीहरू बाक्लै भेटिन्छन्। डी. भी. चिट्ठा परेर अमेरिका आउने नेपालीहरूको संख्या मात्रै तिस हजारभन्दा बढी भइसकेको छ।
अमेरिका यस्तो एउटा विचित्रको देश हो जहाँ संसारको कुनै पनि कुनाबाट आएका मानिसहरु निर्धक्कका आफ्नो घर सम्झी बस्न सक्छन। मानिसहरु घरबाहिर जाँदा गोजीमा पासपोर्ट बोकेर हिड्नु पर्दैन। यसैले अमेरिकी समाजलाई ‘मेल्टिंग पट‘ (धातु पगाल्ने भाडो) भनेर चिनिन्छ। ‘मेल्टिङ पट’ भनेको सबै मेलमिलाप गरि बस्न सक्ने भनेको होला। अमेरिका यति ठूलो समुद्र रहेछ र यो समुन्द्रमा हरेक दिन मानिसहरुको ओइरो लाग्दा पनि सानो थोपा जस्तै हराउछन।
अमेरिका आउना साथ अनुभव गरिने कुरा हो, यहाको बिबिधता। संसार भरिका मानिसहरु यहि छन्। रेस्टुरेन्टमा जानुस वा किराना पसलमा जानुस, सबभन्दा पहिले अमेरिकन भन्दा अरु नै देशका मानिसहरु सित जम्का भेट हुनेछ, कामदार उनै छन्, ग्राहक उनै छन्। त्यसैले कहिले कहिँ साथीहरुले मलाई प्रश्न गर्नु हुन्छ, “होइन, यो गोराहरु त्यति धेरै देखिन्नन्, कता बस्दा रैछन?” कुरो त सहि हो।
आउनुस, अब एकछिन अमेरिकामा बस्ने संसार भरिबाट आएका मानिसहरुको लेखा जोखा गरौ।
अमेरिकामा सबैभन्दा बढी संख्यामा गोराहरु छन् जुन जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी छन् (करिव १९ करोडको हाराहारीमा), त्यसपछि दोस्रो स्थानमा दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट आएका मानिसहरुको बाहुल्य छ जुन जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत भन्दा बढी छ (करिब ६ करोडको हाराहारीमा पर्दछ)। यति छिटो यो अवधिमा यो संख्या ह्वात्तै बढ्नुमा दक्षिणतिरको खुल्ला सिमाना नै हो जसबाट दैनिक हजारौको संख्यामा ओइरिएका हुन्छन।
त्यसपछि अस्वेत (काला जाती) संख्या पर्दछन, जसको संख्या १२ प्रतिशतभन्दा थोरै माथि छ (करिब4करोडको हाराहारीमा पर्दछ) । हामीहरु एसियनमा पर्दछौं र एशियनहरूको जनसंख्या करिब १ करोड ७० लाखको हाराहारीमा छ अर्थात कुल जनसङ्ख्याको ५.५ प्रतिशत मात्रै हो। बंगलादेश, नेपाल, फिलिपिन्स, कोरिया, जापान, ताइवान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भिएतनाम, क्याम्बोडिया लगाएत एशियाका सबै देशहरुको जम्मा संख्या हो यो। (अमेरिकाको जनसंख्या ३० करोडको आधारमा)
मैले माथि भनेका कुराहरु तल बार चित्रमा राखेको छु, सजिलोको लागि ।